२ श्रीमानलाई फिल्मी सैलीमा एक युवतीले ठ,गिन, ७ महिनासंगै बसी सम्पति लिएर फेरी पुर्ब श्रीमानसंग फ,रार (भि, डियो सहित) – Ap Nepal
उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिँदा पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । यसैसाता श्रीमति बुद्धिमायासँग सम्पर्क गर्दा उल्टै धम्की दिएको उनले बताए ।हिमालकी दिदी निता राईले भाई सोझो भएकाले विदेशमा दुख गरेर कमाएको रकम लिएर बुहारी फरार भएको बताइन् । तलको भिडियो हेर्नुहोस्…
Prevनारायण काजी श्रेष्ठले थ; र्काएपछि ऋषि धमलाले फर्काए यस्तो जवाफ, बोल्दा बोल्दै आँ:सु झा’रे (भि;डियो सहित)
Nextआज घट्यो सुनको मुल्यो तोलाको कतिमा कारोबार हुदै छ त हेर्नुहोस्….
तपाँइको नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस्
आज घट्यो सुनको मुल्यो तोलाको कतिमा कारोबार हुदै छ त हेर्नुहोस्….
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल असार ९ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ जुन २३ तारीख